Golaha Ammaanka ee QM oo ka arrinsan doono Shixnadaha Hubka ee ay Iiraan u soo daabulaan Somalia iyo Yemen.
Ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in 15-ka xubnood ee Golaha Ammaanka ee QM ay bishan January 18-da yeelan doonaan Kulan Khaas ah oo ay kaga hadli doonaan Arrimaha dalka Iiraan, gaar ahaan Shixnadaha hubka ee ay u diraan Somalia iyo hub-siinta joogtadda ee Maleeshiyaadka Xisbullaahi-Lubnaan iyo Xuutiyiinta Yemen.
Kulankaasi ayaa waxaa kaloo lagu eegi doonaa Warbixin 6-biloodle ah oo uu Xogahayaha Guud ee QM ee xilka ka , degay, Ban Ki-moon u gudbiyey Golaha Ammaanka ee QM, wuxuuna walaac xooggan kaga muujiyey Shixnadaha Hubka ee ay Iiraaniyiinta u daabulaan dalalka Somalia, Lubnaan iyo Yemen.
Wakaalladda Wararka ee REUTERS oo heshay Nuqul ka mid ah Warbixintaasi oo ku taariikheysnayd bishii December 30-da ee sannadkii hore ayaa lagu muujiyey inay Dowladda Iiraan ku xad-gudbayso Qaraarkii Golaha Ammaanka ee QM ee tirsigiisu ahaa 2231 ee looga mamnuucay Horumarinta Gantaalladda, kadib, markii ay Maleeshiyadda Xisbullaahi Lubnaan u dirtay Gantaalo casri ah.
Warbixinta waxaa kaloo lagu muujiyey inay Iiraan shixnado hub u dirtay Somalia iyo Yemen, iyadoo ay Ciiddanka Caalamiga ee ilaaladda ka haya Badweynta Hindiya ay bishii March ee sannadkii hore qabteen Markab laga leeyahay Iiraan oo Shixnad hub ah u soo waday Somalia ama Yemen.